Fampiasana sary amin'ny atiny sy ny vokany eo amin'ny fiaraha-monina, ny fikarohana ary ny ecommerce
Momba ny sary daholo
Alakamisy, Jona 7, 2012 Alarobia, Jona 6, 2012 Jenn Lisak Golding
Isaky ny herinandro vitsivitsy na mihoatra dia miantso ny lehibeko aho hameno indray ny teti-bolan'ny sary. Tsy misy sombin-javatra zarainay ho an'ny tenanay na ho an'ny mpanjifanay izay tsy manana karazana sary, sary, na sary manokana natokana ho azy. Fantatsika, amin'ny Martech Zone, fa rehefa misafidy sary tsara hahitana ny hevitsika isika, dia maro ny mpitsidika mamaky, mizara bebe kokoa, ary maneho hevitra bebe kokoa momba ny atiny. Sahirana ny olona amin'izao fotoana izao ary ny sary dia sarobidy tokoa amin'ny teny arivo rehefa mampivelatra ny atiny ianao.
Ny sary dia manatsara ny zava-drehetra. Ary zavatra tsara izany, raha jerena ny fiovan'ny goavana amin'ny tontolon'ny media sosialy izao dia manome lanja bebe kokoa ny fampiasana sary avo lenta amin'ny atiny. Ka ohatrinona ny manampy sary amin'ny atiny? Mety betsaka noho ny noeritreretinao azy.
Na dia fantatsika fa marina amin'ny Martech Zone, misy tokoa ny porofo fa ny sary dia tena lakilen'ny fahombiazana rehefa manoratra sy mizara atiny ao amin'ny tranonkala.
Momba ny sary daholo by MDG Advertising
Tags: Content Marketingfampiasana sarysaryInstagramistockphotofikarohana eo an-toerana
Mamorona tranokala maimaim-poana sy tsara tarehy ao anatin'ny minitra